टवीटर सीईओको तलब वार्षिक डेढ डलर मात्र ! - Sagarmatha Online News Portal
टवीटर सीईओको तलब वार्षिक डेढ डलर मात्र !
एजेन्सी । माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरका सीईओ ज्याक डोर्सीले सन् २०१८ मा कम्पनीबाट यति कम तलब बुझे कि जो कोहीलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ । हुन त उनले सन् २०१५ मा दोस्रोपटक सीईओ बनेसँगै ट्वीटरबाट कुनै तलब सुविधा लिएका थिएनन् । तर सन् २०१८ मा उनले ट्वीटरबाट कूल १ डलर ४० सेन्ट तलब बुझेका छन् । पछिल्लो चार वर्षमा उनले तलब लिएको यो पहिलोपटक हो ।
ट्वीटरले अमेरिकाको सेक्योरिटिज एण्ड एक्सचेन्ज कमिसनलाई बुझाएको रिपोर्ट अनुसार सीईओ डोर्सीले सन् २०१८ को वर्षभरमा जम्मा १.४० डलर तलब पाएका हुन् । ट्वीटरका सह–सस्थापकसमेत रहेका डोर्सी कम्पनीको सुरुवातताका दुई वर्षसम्म ट्वीटरको सीईओ थिए । सन् २००८ मा उनले उक्त पद छाडे । त्यसपछि सन् २०१५ मा उनले पुनः ट्वीटरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद सम्हाले ।
Published On: २९ चैत्र २०७५, शुक्रबार